Admin – Patrika Nepal
मलेसियामा आठ बर्षसम्म कष्टकर जिबन बिताएर हालसालै नेपाल फर्किएका मोदनाथ तिमल्सिनाका कान्छा छोरा बिरेन्द्र तिमल्सिना बिगत ११ महिनादेखी बेपत्ता थिए । मिडियाको सहयोगमा आज उनी ११ महिनापछी फेला परेका छ्न र आज उनी मिडियासामु आएका छ्न । ओखलढुंगाको एउटा गाउमा एकदमै बि”जोग अबस्थामा उनी फेला परेका छ्न । मोदनाथ तिमल्सिना र देबकी तिमल्सिना भने कान्छा छोरा बिरेन्द्र हराएसगै उनकै चिन्तामा म”र्नु न बाच्नु भएका छ्न । आफुलाइ गाउँ गएर बाबुआमालाइ भेट्न एकदमै मन लागेको कुरा पनि उनले बताए । यसअघि उनी काठमाडौंको बल्खुको एउटा होटलमा काम गर्ने गरेको कुर पनि उनले खुलाए । होटलमा काम गर्दा आफुले निकै दुखहरु र या”तनाहरु झेल्नुपरेको बताउछ्न उनी । बिहानको पाच बजेदेखी बेलुकिको १२ बजेसम्म आफुले होटलमा खट्नुपरेको बताउछ्न उनी । यतिका धेरै मिहिनेत गर्दा पनि आफुलाइ गाउघरको याद आउदा घर फर्किने पैसा पनि नभएको बताउछ्न उनी । आफ
हरेक मानिसहरुले आफ्नो एउटा छुट्टै मौलिक कलाका साथ जन्म लिएका हुन्छ्न । कोहि गित गाउन माहिर हुन्छ्न त कोहि नाच्न, कोहि पढ्न माहिर हुन्छ्न त कोहि खेल्न । तर आज भने एउटा यस्ता युबक भेटीएका छ्न जसको कला एकदमै फरक किसिमको रहेको छ । आजको घटना भने एउटा यस्ता ब्यक्तिसग सम्बन्धित छ जो एक पेन्टर हुन तर दर्शकले उनको पेन्टिङको कलाभन्दा अनि नाच्ने कला मन पराइदिएका छ्न, अहिले टिकटकमा उनी भाइरल भएका छ्न । बिगत लामो समयदेखी एक सामान्य पेन्टरको रुपमा जिबनयापन गरिरहेका एक पुरुष अहिले भने त्यही पेन्टिङका साथसाथै आफुसग भएको नाच्ने कला देखाएर टिकटकमा लोकप्रिय बनेका छ्न । उनको टिकटकमा मिलियन्स अफ फलोअर रहेका छ्न । राजु तामाङ नाम गरेका उनै पेन्टरवाला आज मिडियामा आएका छ्न । होटलमा कुकको काम गरिरहेका उनी लकडाउनपछी पेन्टिङ लागेका रहेछ्न, कला नै कलाले भरिपुर्ण छन उनी । कुकिङ, पेन्टिङ अनि डान्सिङ तिनै क्षेत्रमा
काठमाडौं / अभिनेत्री सामन्था रुथ प्रभु दक्षिण भारतीय फिल्मकी लोकप्रिय अभिनेत्री हुन् । उनले गत वर्ष अमेजन प्राइम भिडियोको सुपरहिट सिरिज ‘द फेमिली मेन सिजन २’बाट हिन्दीमा डिजिटल सुरुवात गरिन् । यो सिरिजमा उनको अभिनयले सबै प्रभावित भए । यो सिरिजमा काम गरेपछि सामन्थालाई उनका फ्यानहरू बलिउडमा पाइला चालेको हेर्न चाहेका छन् । उनलाई बलिउडका धेरै फिल्मबाट अफर पनि आइरहेका छन् । प्राप्त खबरअनुसार उनलाई यशराज फिल्म्सले आफ्ना तीन ठूला फिल्ममा अफर गरेको छ । उनलाई यशराज फिल्म्सले निकै महँगो पारिश्रमिकमा आफ्ना तीन फिल्ममा अनुबन्धको प्रस्ताव गरेको हो । अभिनेत्रीले पनि यी फिल्ममा अभिनयको चासो देखाएकी छन् । यद्यपि अभिनेत्री र प्रोडक्सन हाउसले यो विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि गरेको छैन । सामन्था चाँडै नै ‘द फेमिली मेन’का निर्देशक राज र डीकेका साथ सिटाडेलको स्पिन-अफमा काम गर्दैछिन् । उनको हातमा ‘काथु वकुला
काठमाडौं – सरकारले माघ १६ देखि २० गतेसम्म कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूबीचको बैठकले खोप दिने प्रयोजनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए । “यही माघ १६ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने प्रयोजनका लागि खोल्ने निर्णय भएको छ । त्यो समयमा हामीले विद्यालयमा खोप अभियान चलाउने निर्णय गरेका छौँ,” सहसचिव कोइरालाले भने, “हामीले निर्णय गरेका छौँ सम्बन्धित मन्त्रालयले सूचना जारी गर्छन् र कार्यान्वयनमा जान्छ ।” बैठकले विश्वविद्यालयस्तरमा चलिरहेका र मिति निश्चित भएका परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कोभिड संक्रमण भएका विद्यार्थीलाई छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरेर पर
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा उठाउन नसकिएला । सवारी साधन चलाउँदा सावधानी अपनाउनु होला । दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काममा हात हाल्ने समय छ । तार्किक क्षमता बढ्नेछ । विशेष सभा समारोहमा भाग लिने मौका प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला । रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ । व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सक्छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – परिवारजनको साथले काममा उत्साह जगाउनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखमय बन्नेछ । श्रद्धा र परोपकारमा मन जानेछ । स्वास्थ्यमा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ । सानातिना काममा अल्झनुपर्दा मुख्य काममा अवरोध हुन सक्छ । कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – अस्वस
केहिदिन अगाडिको कुरा हो कपिलबस्तु जिल्ला कुश्माबैरेणि घर भएर बसोबास गर्दै आएकी नौ बर्षिय बालिका सन्जिता पोखरेलको भिडियो युट्युबमा सार्बजनिक गरिएको थियो र सन्जिताले आफ्नि आमा बिदेशमा रहेको, बाबा बिरामी रहेको र आफुलाइ पढ्ने ठूलो रहर छदाछ्दै पैसाको अभाबले पढ्न नसकेको बताएकी थिइन । यसैक्रममा आज भने मिडियाकर्मी सहयोगका साथ सन्जिताको घरमा नै आएका छन । पढ्ने ठूलो रहर बोकेकी सन्जिता आफ्नो स्कुलको फिस नतिरेको नै १ बर्ष भैसकेको भन्दै आमासामु धुरुधुरु रुइन । सन्जिताकी आमा भिडियोकल मार्फत उनिहरुसग जोडिएकी थिइन । क”ठै ब”रा सन्जिता ! ममिलाइ चाडै घर आउनु न भन्दै बि”न्ती बि”सा”उ”छि”न । चाडपर्बमा सबै साथी आफ्नो ममिबाबासग घुम्न जान्छ्न, मेरो चाहिँ कोहि छैन भन्दै रु”इ”न उनी । सबैलाइ रुवाइन सन्जिताले, सन्जिताकी आमाले भने सबैले सहयोग गरिदिनुभयो र बाबाको छिट्टै अप्रेसनको लागि पैसा भयो भने चाडै घर आउने बाच
मेलम्ची, ५ माघ-पेट दुख्ने समस्याले खपिनसक्नु भएपछि सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती-५ का रामनाथ लुइँटेललाई मेलम्ची अस्पताल लगियो । अस्पतालमा भर्ना गरेर दुई दिन राखियो । रिपोर्ट आयो- आन्द्रामा समस्या छ । छिटोभन्दा छिटो अप्रेसन गर्न सुझाइयाे । तर, काठमाडौँको छाउनीमा गएर चेकअप गर्दा अप्रेसन गर्न नपर्ने र बिरामी त्यति धेरै जटिल नभएको रिपोर्ट आयो । लगत्तै उनलाई केही समयपछि निको पनि भयो । इन्द्रावती गाउँपालिकाका कुमार आचार्यलाई पनि २१ पुसमा पेट दुख्ने समस्या भयो । मेलम्ची अस्पताल गए । परीक्षण गर्दा किड्नीमा पानी जमेको भनियो । ५.५ एम एमको पत्थरी रहेको र तत्कालै अप्रेसन गरिहाल्न आचार्यलाई अस्पतालका चिकित्सकले सुझाव दिए । उक्त अस्पतालले दायाँपट्टी पत्थरी छ भनेकाे थियाे । उनी बनेपाको केपी पोलिक्लिनकमा गए । त्यहाँ परीक्षण गराउँदा बायाँ पट्टी पत्थरी रहेको छ भनियो । दुई वटा अस्पतालमा फरक-फरक रिपोर्ट द
महोत्तरीका स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठन गराउन सके विद्यालय बन्द गर्न जरुरी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । जिल्लाका सिमाना नजिकका पालिकाहरू सम्सी, जलेश्वर, मट्टीहानीजस्ता पालिकाहरूमा जोखिमका हिसाबले संवेदनशील भए पनि अन्य पालिकामा त्यति धेरै जोखिम नभएको स्थानीय सरकारहरूको दाबी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट १५ माघसम्म पठनपाठन बन्द गर्नै पर्ने निर्देशन जारी भए पनि जिल्लाका कतिपय पालिकाहरूले त्यसलाई टेरेका छैनन् । गौशला नगरपालिकाले त कुनै पनि सिक्षण संस्था बन्द नगरी पठनपाठनलाई जारी राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । ‘भने जति पाठयक्रम पनि नसकिएको र पटक–पटक बन्दले बालबालिकाको भविष्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेकाले विद्यालय पठनपाठन सुचारु राख्ने निर्णय गरेका हौँ,’ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सिवनाथ महतोले भने । यता बर्दिबास नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमण जोखिमलाई
काठमाडौं । सुनसरीमा आयोजित बुर्जु महोत्सवमा हिजो भोजपुरी स्टार खेसरीलाल यादव नआएको भन्दै दर्शकले विध्वंस मच्चाए ।महोत्सवस्थलमै चारवटा स्करर्पिओ गाडीमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । कलाकार यादवले यस विषयमा मुख खोल्दै सबै दोष आयोजकलाई दिएका छन् । आफू बसेको होटलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रशासनले दिएको अनुमति रद्द भएको विषयमा आयोजकले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको गुनासो गरे । साथै, हिजोको घटनामा आफ्नो डेढ करोडको क्षति भएको दावी गर्दै उनले आयोजकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । यादवले भने, ‘यो घटनामा जनताको दोष छैन, न त प्रशासनको न मेरो दोष छ । दोषि भनेका आयोजक हुन् । उनीहरुले मलाई नै गुमराहमा राखे ।’ उनले घटनामा आफ्नो टोलीका सदस्यहरु घाइते भएको र चारवटा स्करपिओ जलेको बताए । यस विषयमा आयोजकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि प्रशासनको सहयोग लिने बताएका छन् । यादव
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले गणतन्त्रको खोस्टोको संज्ञा दिएका छन् । नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनताले परिवर्तनको महसुश गर्न न’सक्ने कागजको गणतन्त्रले समाधान दिन नसक्ने बताएका छन् । अवको निर्वाचन पछि, एमाले सरकारमा जाने र राजा लाई देश सुम्पिने र राजा संग मिलेर काम गर्ने बताए। एमाले चाँगुनारायण– ८ नम्बर वडा कमिटीले सुडालमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले वर्तमान अवस्थामा कागजले समाधान दिन नसक्ने बताएका हुन् । उनले भने, “अघिल्लो सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन खोजेको थियो, तर काम गर्न दिइएन।” एमाले सचिव ज्ञवालीले एमालेप्रति जनताको विश्वास सरकार बाहिर रहँदा बढ्दै गएको दा’बी गरे । ज्ञवालीले भने, “यतिखेर एमाले प्रतिपक्षमा छ, गतिशील छ भन्ने आत्माविश्वासले प्रतिपक्षमा सत्तापक्ष पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको छ, यो आम जनताको विश्वासले हो ।
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (779)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (649)
१.	सुर्खेतबाट आयो दुख लाग्दो खबर – एकै परीवारका चार जनाको मृत्यु (76)
३.	छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् (65)
५.	काठमाडौंको कलंकीमा घट्यो डरलाग्दो घटना (59)
६.	त्रिभुवन विमानस्थलमा आजफेरी यस्तो भयो ! ३ करोड नेपालीको शिर निहुरियो (59)
७.	जापानमा एक नेपालीको मृ*त्यु ! मनमा अलिकति दया भए (R.I.P) लेख्नुहोस (58)